Indlela yokuphucula uluhlu lwam imikhiqizo kwi-Amazon ngegama lokukhangela?
Uluhlu lwemveliso kwi-Amazon kunye nophando lwegama mhlawumbi luyizona zimbini eziphambili zokhuphiswano lwakho. Ndiyathetha ukuba umgangatho wokwakheka kwetayitile, inkcazo yemveliso kunye nesethi yeengongoma zebhola malunga nesibonelelo sakho - zonke zihamba ngokuzenzekelayo ngokuchanekileyo amagama angundoqo kunye nokusetyenziswa kwazo okufanelekileyo. Ngoko, unako ukuthatha umgca kumncintiswano kwi-Amazon kunye negama lokukhangela lisebenza ngendlela efanelekileyo. Kwaye ndiza kukubonisa iindlela ezintle ezintle zokungena kwi-ecommerce-oriented research engundoqo kunye nokwenza uluhlu lwemveliso.
Kodwa ngaphambi kokuba siqale, ndincoma ukuba ube ne-check-check to avoid the least issues:
kunye neengqungquthela zeen bullet azizityebi ngamazwi angundoqo kunye nemigca eyimfuneko yomsila.
Eli candelo ngalinye likhankanywe ngokugqithiseleyo lizaliswe ngamagama angundoqo, ngaloo ndlela yenza yonke into igqitheke.
Ukuba unelungelo elaneleyo leemifanekiso okanye umgangatho ophantsi wezinto ezibonakalayo (qaphela ukuba kunye nemifanekiso emibini okanye emibini ngemveliso awuyi kufika naphi na - masijongane nayo).
Ulwazi olungaphumelekanga kwi candelo kunye nenkcazo yemveliso okanye indawo yesikhokelo sebhola.
Emva kokuba uqinisekisa ukuba yonke into isendaweni kunye nezihlomelo zemveliso yakho, lixesha lokufumana amathuba athembisayo kwi-Amazon ngokukhangela amagama. Ngaloo ndlela, kuya kufuneka ufumane umfanekiso omkhulu wegama eliphambili elijoliswe kumagama athile asetyenziswa ngabaqhubi abasondeleyo. Ngakolunye uhlangothi, ke, kuyimfuneko ukuqonda iinjongo zangempela ze-Amazon igama lokukhangela ukwenza ezininzi kwiimfuno zomsila ezide ezisetyenziselwa abathengi abahlala ngaphandle. Yilapho eli lixhobo elithile lenkcazelo yegama elingundoqo liza kudlala! Phakathi kweentlobo ezahlukeneyo ezikhethileyo, ndinokucebisa aba bancedisi ababini be-intanethi ngokusebenza kakuhle.
Amazwi omthengisi sisixhobo esikhulu se-Amazon elithi search. Ingakunceda ukuba uqhubeke nokuphucula iphepha lakho lomkhiqizo ukuze zihambelane nezicelo ze-shopper zangempela. Ekugqibeleni - ukuba uboniswe phezulu kwiphando olufanelekileyo. Zama amagama omthengisi ukuba uqonde kakuhle ukuba yimigangatho enemigangatho ephezulu yokukhangela ukuze ulungelelanise. Qaphela ukuba olu khetho lusetyenziswe ngokukhethekileyo kwiipulatifomu ze-ecommerce kunye ne-drop shipping shipping. Phakathi kwamacala aso anamandla, isixhobo sinokuqokelela amagama angundoqo asetyenziswayo kuphela kwi-Amazon ngokwayo kodwa iqokelela amabinzana asetyenziswa phezulu ukusuka kwezinye iindawo ezifana neJet kunye neWalmart.
Ububanzi bungaba ngumhlobo omhle kubo bonke abathengisayo abathengisayo kwi-Amazon. Yintoni enye - eli gama eliphambili kunye nesixhobo sophando lwemveliso sibonisa amandla akhe ekugqibeleni xa unesidingo soqhagamshelwano oluxabisekileyo. Ngokucacileyo, ubungakanani bunokukunceda ukuba ufumane okusemgangathweni kwamagama akwii-top-making and phrases phrases to search for the adversives in the rank of Amazon. Ngexesha elifanayo, esi sixhobo sinokubonisa ukuba unokwenza amagama angundoqo ukwenza iziphakamiso ezifanelekileyo kwiimpawu ezidumileyo zifuna ukuba uqwalaselwe ngokuchanekileyo ngexesha. Ububanzi buneenkalo eziyingqayizivele kwi-inbuilt evumela ukuba kulungiswe amaphankaso e-PPC ukuze baqhube kwizinga eliphezulu lokuqhuba. Ngoko, unganqikazi ukuba uzame uze ubone ukuba ziphi izicwangciso ezilindele nje ukuba uluhlu lwemveliso yakho elungileyo. Umnqweno omhle